Ukuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG: izidingo namanani | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Guqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG
IsiJalimane Portillo | | Ama-Autogas
I-LPG noma eyaziwa nangokuthi i-petroleum gas i-liquefied inguphethiloli osuselwa kugesi wemvelo osebenza kahle kakhulu nentengo ephansi kepha edinga izindleko zokuqala. Baningi abantu abafuna uguqule imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG kepha abayazi imithethonqubo noma intengo yayo kahle.
Ngalesi sizathu, sizonikezela le ndatshana ukukutshela lokho okufanele ukwazi ukuze ukwazi ukuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG.
1 Ushintsho lwe-Fuel
2 Izici zokuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG
3 Intengo yokuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG
Ugesi kaphethiloli oketshezi unezindleko eziphansi neziteshi zegesi, yize zingekho amaphampu yonke indawo. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukuze kuguqulwe imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG, kufanele kuhlangatshezwane namazinga athile. Inguquko ayinakwenzeka kuzo zonke izimoto futhi Uma ufuna ukuthola ilebuli ye-ECO ku-DGT, imoto yakho kufanele ihlangabezane nemibandela ethile. Abakhiqizi abaningi sebenazo izinhlobo zabo ezinamamodeli ane-Autogas ezilungiselelwe ngokwemboni ukwamukela i-LPG nophethiloli. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuguqula imoto kaphethiloli ukuyenza ihambisane nophethiloli wegesi onamanzi.
Okunye ukungabaza okuvamile yilokho okudingekayo ukuze sikwazi ukuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG. Phakathi kwezinzuzo zerhasi likaphethiloli onamanzi sithola ukusetshenziswa okuncishisiwe nentengo ephansi.
Izici zokuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG
Lezi zimoto yizimoto ezinenjini yokushisa ikakhulukazi injini kaphethiloli. Kungashiwo ukuthi yizimoto ze-bifuel ezinenjini eyodwa kodwa ezinamandla okubili. Lokhu kusho ukuthi banamathangi kawoyela ohlukile. Ingasebenza kahle ngophethiloli noma ngophethiloli onamanzi ngokungacacile. Ngakho-ke, ezingeni lobuchwepheshe, liqala ngesisekelo semoto ejwayelekile kaphethiloli.
Ithangi likaphethiloli likaphethiloli onamanzi anezici ezithile zobuchwepheshe ezihlukile uma kuqhathaniswa nezokujwayelekile. Lezi zimo zobuchwepheshe yizo ezichaza ukuthi imoto enenjini eshisayo kaphethiloli ingaguqulwa ibe yi-LPG noma cha. Okunye okufanele kubhekwe yimithetho. Futhi ngukuthi uchungechunge lwezidingo kanye nemingcele kufanele kuhlangatshezwane nalo ukuze kuguqulwe lube yigesi kaphethiloli onamanzi. Kunezici ezithile ezithile okumele zichazwe kabanzi ukuze wazi kahle ukuthi ungakwazi yini ukuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG.
Uma sihlaziya ezingeni lobuchwepheshe, siyabona ukuthi zonke izimoto zikaphethiloli ezibhaliswe kusukela ngo-1995 kuye phambili zingaguqulwa zibe yi-petroleum gas eketshiwe. Kuphela kumamodeli athile abhaliswe kusukela ngalolu suku kuya ku-2001, okuyilawo ahambisana ne-EURO 3 noma imithethonqubo yakamuva yiyo engaguqulwa. Ngokuya ngalesi sisekelo, kufanele kubhekwe ukuthi ngabe imoto ijova ngqo noma injekene engaqondile. Izimoto zikaphethiloli ezine- Uhlelo lokujova ngokungaqondile lungaguqulwa lube yigesi kaphethiloli onamanzi kalula. Ukuguqulwa kungenziwa kunoma iyiphi i-workshop ekhethekile. Okuletha ubunzima bezobuchwepheshe futhi okungenzeka kungakwazi ukuguqulela ekujezisweni kukawoyela amamodeli kaphethiloli anohlelo lokujova ngqo.
Isizathu sokuthi ungeke ukwazi ukuthi kungenxa yokuthi imoto eguqulwe yaba yi-petroleum gas ewuketshezi isetshenziswe isethi yesibili yama-injektha we-LPG. Endabeni yamamodeli anomjovo oqondile, kusho ukuthi abajovo kaphethiloli abawutholi uphethiloli lapho imoto isebenzisa uphethiloli onamanzi. Uma lokhu kwenzeka, kungadala ukweqisa ezingeni lokushisa kwenjini nezinkinga ezahlukahlukene. Izimoto ezinefektri ye-LPG zinezinjini zomjovo eziqondile futhi zinama-injectors alungisiwe ukumelana namazinga okushisa aphezulu.
Ezingeni lobuchwepheshe, kungenzeka ukuguqula imoto kaphethiloli iye ku-LPG ngomjovo oqondile kodwa ushintsho lusho ukuthi abajova kufanele baqhube ukushisa kangcono kanye nama-insulators e-Teflon kufanele afakwe ukuze akwazi ukumelana nokushisa. Ngokusobala, konke lokhu kuthwala izindleko zokuqala eziphakeme.
Intengo yokuguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG
Njengoba sazi, ukuguqula imoto kusuka kuphethiloli kuya ku-LPG kunezinzuzo eziningi, noma futhi kunezinkinga ezithile. Ugesi kaphethiloli oketshezi udala isisekelo sebutane ne-propane. Kuyiqiniso ukuthi liyanda futhi abakhiqizi abaningi bayayifaka kumamodeli abo. Futhi ukuthi inezinzuzo ezinhle kwezomnotho nakwezemvelo ezethula enye indlela ethokozisayo kuphethiloli.
Intengo yezimoto iyefana naleyo kaphethiloli noma amayunithi kadizili, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ashibhile kakhulu. Futhi ukuthi ukujeziswa kukawoyela kunguphethiloli oshibhile kakhulu kunokwendabuko. Kubalwa ukuthi ngaphezulu noma ngaphansi izindleko ezingeziwe zemoto kuyazikhokhela lapho umsebenzisi enza cishe amakhilomitha angama-30.000 ngonyaka. Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zimoto zinamathangi amabili ngakho ukuzimela kwazo kuphakeme. Okusho ukuthi, banethangi likawoyela wakudala nophethiloli ojwayelekile. Ngenxa yalokhu, bangahamba amakhilomitha angaphezu kwe-1.000 XNUMX ngaphandle kokuma ukuyofaka uphethiloli.
Uma ungenayo imali eyanele yokuthenga imoto ene-LPG efakiwe, ungaguqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG. Lapho usuhlolile ukuthi lokhu kuguqulwa kunenzuzo kuwe, kufanele uye kumasifundisane okhethekile ukufaka ikhithi evunyiwe. Lokhu kunguquko ebalulekile, ngakho-ke kungakuhle amasonto ambalwa ngemuva kokuhlunga ukuvakashela i-ITV ukuqinisekisa ukuthi ukufakwa kulungile nokuthi ushintsho lungabhaliswa ngokusemthethweni. Ithangi le-LPG lifakwe kahle esondweni lesipele.
Ngokuqondene nentengo, ukuphola kuyehluka kuye ngokuhamba kwenye imoto ngayinye, kepha ngokuvamile ibanga phakathi kwama-euro ayi-1.500-2.000. Ukufakwa kuthatha izinsuku ezimbalwa futhi kuya ngohlobo lwemoto.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi ungayiguqula kanjani imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ama-biofuels » Ama-Autogas » Guqula imoto isuke kuphethiloli iye ku-LPG
Isibulala-zinambuzane esizenzele sona